သီချင်းအခွေသစ်ကို အားပေးကြမ်းကြသူတွေကြောင့် ကြိုးစားပမ်းစားလက်မှတ်ထိုးနေရတဲ့လင်းလင်း – MMYC
သီချင်းအခွေသစ်ကို အားပေးကြမ်းကြသူတွေကြောင့် ကြိုးစားပမ်းစားလက်မှတ်ထိုးနေရတဲ့လင်းလင်း
December 24, 2020 - by Shein
လင်းလင်းရဲ့ဂီတဖန်တီးမှုတွေကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ Pre order တင်ချိန်မှာတင် အားပေးကြမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကို “ပရီအော်ဒါ ၂၀၀ ဟာ ဆယ့်ငါးမိနစ်နဲ့ ကုန်လို့ ၅၀၀ ထပ်တိုးတာလဲ ကုန်သွားပြီး ထောင်ဂဏန်းရောက်သွားတယ်။ အခုထိလဲ တောက်လျှောက် တက်နေလို့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီတော့ ,,,,, ၂၈ ရက်နေ့ထိ မှာသမျှ အော်ဒါတွေကို ရသလောက် လက်မှတ်ထိုးပေးပါမယ်။ ကိုယ့်လူတွေဘဲ မှာနိုင်မလား ? ကျနော်ဘဲ နေ့,ည မနားတမ်း လက်မှတ်ထိုးနိုင်မလား ! တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျ”ာ ဆိုပြီးတော့ လင်းလင်းက သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မှာထားတဲ့ အခွေတွေမှာကြိုးစားပမ်းစားလက်မှတ်ထိုးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း”ဆရာမထံ အိမ်အလုပ်တွေကနေ ၃ ရက်ခွင့်ယူထားတယ် ။ ဟို အချစ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလဲ အဘိုးအဘွားဆီ အိမ်နှင်ဒဏ် ပို့ထားတယ်,,ကဲ,,,, လာစမ်း ဒီလို အပုံ ၃ ပုံရှိတယ် လက်မှတ်စ,ထိုးပြီ ” ဆိုပြီးတော့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားထားပြန်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ လင်းလင်းရဲ့သီချင်းအသစ်တွေကို နားထောင်ဖို့အတွက် ရင်ခုန်နေကြပြီထင်ပါရဲ့နော်…
Source : HtweLynnKo,CRD-Cele Gabar Tv
Previous Article နယူးရီးယားညမှာဖျော်ဖြေမယ့် အငြိမ့်လေးအတွက် အပီအပြင်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တဲ့ ခင်လှိုင်
Next Article ဇာတိမြေရဲ့လေတွေကို ဘူးထဲထည့်ပြီး အိမ်လွမ်းသူတွေဆီ ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီ